XOG: Maxaa kasoo baxay wada-hadal dhex-maray MD Farmaajo iyo Sheekh Shariif ? – Idil News
XOG: Maxaa kasoo baxay wada-hadal dhex-maray MD Farmaajo iyo Sheekh Shariif ?
Wada-hadalo Khadka Taleefanka ah ayaa xalay dhex maray Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Madaxweynihii Hore ee DKMG aheyd Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay loo doortay Hoggaamiyaha Madasha Xisbiyadda Qaran, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Xubnaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa xaqiijiyay in Madaxweyne Farmaajo la soo xiriiray Sheekh Shariif, kana dalbaday in si gaar ah u kulmaan, hase ahaatee Shariifka ayaa u sheegay in shalay wixii ka horeeyay uu ahaa shaqsi, balse haatan uu hoggaamiyo Madasha Xisbiyada, isla markaana haddii ay kulmayaan ay tahay in Madasha Hoggaankeeda inay qeyb ka ahaadaan kulanka, waxaana la sheegay in Madaxweynuhu ku yiri inuu ka soo fiirsanayo.
Todobaad ka hor ayay aheyd markii kulan qarsoodi ah uu Muqdisho ku dhex maray Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin iyo Xubno ka tirsan Xisbiga UPD, kuwaas oo ka wada-hadlay arrimo ay kamid yihiin Doorashada iyo inay Dowladda Madaxweyne Farmaajo kala shaqeeyaan muddo kordhin, taas bedelkeedna ay wada dhistaan Xukuumad wadaag ah.